Wafti ka socota UN-ka ayaa soo gaadhay Maamulka Puntland | maakhir.com
Wafti ka socota UN-ka ayaa soo gaadhay Maamulka Puntland
Garoowe:- Wafti balaadhan oo ka socota Q.M ayaa maanta ka soo Tegay garoonka Diyaaradaha ee magaalada Garoowe,waxana waftigaasi soo dhaweeyay Masuuliyiin sare oo ka tirsan Maamulka Puntland,waftigaas ayaa waxa la sheegay inuu qorshahoodu ahaa inay Maamulka Puntland wax ka waydiiyaan arimaha ah in Ciidamo la keeno Dalka Somaliya.
Wafdigaan ka socda UN-ka ayaa ujeedkoodu yahay sidii ay Puntland uweydiin lahaayeen fikirkeeda ku aadan nabadgalyada Soomaaliya iyo sida suurtagal utahay in Soomaaliya la keeno Ciidamo caalami ah iyo waxqabadka Hay’adaha Qaramada Midowbay,waxyan.
Waftigaasi ayaa waxa la sheegay inay markiiba Shir Albaabadu u xidhan yihiin ay la yeesheen Masuuliyina Puntland ugu saraysa sida Cade Muuse iyo Xigeenkiisa Mr Af Qudhac waxana la sheegay inay aad uga wada hadleen Ciidama keenida Dalka Somaliya iyo sidii Maamulka Puntland afti looga qaadi laha in Dalka Somaliya oo idil lagu soo daad gureeyo ciidamo nabad ilaalin ah.
In kastoo Kulankaasi ay qaadeen waftigaasi iyo Xukuumada Puntland uu ahaa mid Saxaafada Daaha laga saaray hadana waxa soo baxay warar hordhac ah oo kulankaasi ku saaban kaasi oo tibaaxaya inay Maamulka Puntland sheegeen sida ay diyaar ugu yihiin in Ciidamo nabad ilaalin ah Dalka oo dhan lagu soo daad gureeyo.
Waxa la cadeeyay inuu Cade Muuse waftigaasi ka dalbaday inay Q.M ka taageeraan tababaro loo furo Ciidamada Boolika kuwaasi oo uu sheegay inay aad uga liitaan dhanka Tababarka.
Waftigaasi ka socoda UN-ka ayaa waxa la filayaa inay laba bari ka dib ay ku laabtaan Xarunta Q.M ee New York oo ay awal ka soo Safreen.
« Gaadhi ay leedahay Hay”adda Horn-lief oo Shil Galay
Diyarad ayaa ku soo dhacday Buuralayda Dalka Angola »